Izindaba - Yini ukuhlukaniswa nemisebenzi yamabhakede
Yini ukuhlukaniswa nemisebenzi yamabhakede
Abembi basebenza ngezikhathi ezahlukahlukene futhi bazokhetha izesekeli ezihlukile zamathuluzi, izesekeli ezijwayelekile njengamabhakede, ama-breakers, ama-rippers, izibopho ze-hydraulic njalonjalo. Ngokukhetha izesekeli ezifanele kuphela, lapho singathola ikhono lokusebenza ngejubane eliphezulu nangempumelelo ezimweni ezahlukahlukene zokusebenza. kodwa uyazi? Ezimweni ezahlukahlukene zokusebenza, kunezinhlobo ezingaphezu kweshumi zamabhakede we-excavator, ngayinye enezinzuzo zayo. Okulandelayo ngamabhakede we-excavator avame kakhulu. Ukuba ngumnikazi wazo kuzokukwenza Imishini ibe namandla nakakhulu!
1. Ibhakede elijwayelekile
Ibhakede elijwayelekile ibhakede elijwayelekile elande kakhulu kubavukuzi abancane nabaphakathi naphakathi. Isebenzisa ukujiya kwepuleti okujwayelekile, futhi akukho nqubo yokuqinisa ebonakalayo emzimbeni webhakede. Izici yilezi: ibhakede linamandla amakhulu, indawo enkulu yomlomo, nendawo enkulu yokubeka, ngakho-ke inendawo yokugcwalisa ephakeme, ukusebenza kahle komsebenzi, nezindleko zokukhiqiza eziphansi. Ilungele izindawo zokusebenza ezilula njengokumbiwa kobumba olujwayelekile kanye nokulayishwa kwesihlabathi, inhlabathi, nohlalu. Kuyaziwa nangokuthi ibhakede lokuhambisa umhlaba. Okubi yikho: ngenxa yokujiya okuncane kwepuleti, ukungabi bikho kobuchwepheshe bokuqinisa, njengamapuleti okuqinisa nokugqoka amapuleti, impilo imfushane.
2. Qinisa ibhakede
Ibhakede eliqinisiwe liyibhakede elisebenzisa izinto zensimbi ezinamandla okugqoka ezinamandla okuqinisa izingcindezi ezinamandla nezingagqokwe kalula njengasekuqaleni kwebhakede elijwayelekile. Akuzuzi nje kuphela zonke izinzuzo zebhakede elijwayelekile, kepha futhi kuthuthukisa kakhulu amandla nokumelana. Abrasiveness nempilo ende. Ifanele imisebenzi esindayo efana nokumba inhlabathi eqinile, amadwala athambile, ukulayishwa kwamatshe nobhuqu.
3. Ibhakede ledwala
Ibhakede lokumba idwala lamukela amapuleti awugqinsi wonkana, engeza amapuleti okuqinisa ezansi, engeza onogada baseceleni, ukufaka amapuleti okuvikela, amazinyo ebhakede anamandla amakhulu, afanele ukulayishwa kwamatshe, amadwala angaphansi okuqinile, amadwala agugile, amadwala aqinile, ukuqhumisa insimbi , njll. Indawo esindayo yokusebenza. It is kabanzi ezimweni ezinzima zokusebenza ezifana nokumba ore.
4. Ibhakede lodaka
Ibhakede lodaka lokumba laziwa nangokuthi ibhakede lokudonsa. Ayinawo amazinyo futhi inobubanzi obukhulu. Ibhakede likulungele kakhulu ukusikwa komhlaba kwemithambeka ngomthamo omkhulu, nokudonswa kwemifula nemisele.
5. Ukulwa ngesihlungo
Kufanelekile ukumbiwa kwezinto ezihlukanisiwe ezihlukanisiwe. Ukumba nokuhlukanisa kungaqedwa ngasikhathi sinye. Isetshenziswa kabanzi kumaphrojekthi kamasipala, ezolimo, amahlathi, okonga amanzi kanye nemiklamo yomhlaba.
Amazinyo ebhakede ancike endaweni yokusebenza ngesikhathi senqubo yokusebenzisa ukuthola uhlobo oluthile lwamazinyo ebhakede. Ngokuvamile, kusetshenziswa amazinyo ebhakede anekhanda oluyisicaba ukumba, isihlabathi esigugile namalahle. Amazinyo ebhakede ohlobo lwe-RC asetshenziselwa ukumba amadwala amakhulu aqinile, futhi amazinyo ebhakede ohlobo lwe-TL asetshenziselwa ukumba imiphakathi yamalahle emikhulu. Amazinyo ebhakede e-TL angakhuphula izinga lokukhiqizwa kwesigaxa samalahle. Ekusetshenzisweni kwangempela, abasebenzisi bavame ukuthanda amazinyo ebhakede wohlobo lwe-RC ajwayelekile. Kunconywa ukuthi ungasebenzisi amazinyo ebhakede wohlobo lwe-RC ngaphansi kwezimo ezikhethekile. Kungcono ukusebenzisa amazinyo ebhakede anekhanda oluyisicaba, ngoba amazinyo ebhakede ohlobo lwe-RC azokwanda "njengesinqindi" ngemuva kokuguga isikhathi esithile. Ukumelana nokumba kuyehla futhi amandla ayamoshwa. Amazinyo ebhakede ayizicaba zomlomo ahlala egcina indawo ebukhali ngesikhathi senqubo yokugqoka, eyehlisa ukumelana nokumba futhi yonge uphethiloli.
02. Buyisela amazinyo ebhakede ngesikhathi
Lapho ingxenye yethiphu yezinyo lamabhakede ligqoka kakhulu, amandla adingwa umucu wokusika phakathi nomsebenzi wokumba nakanjani azokwandiswa kakhulu, okuzoholela ekusetshenzisweni kukaphethiloli okukhulu futhi kuthinte nokusebenza kahle komsebenzi. Ngakho-ke, kudingekile ukufaka esikhundleni samazinyo amabhakede amasha ngesikhathi lapho ukugqoka izinyo zebhakede kuyinto ebucayi kakhulu.
03. Buyisela isihlalo sezinyo ngesikhathi
Ukugqokwa kwesihlalo samazinyo nakho kubaluleke kakhulu empilweni yenkonzo yamazinyo ebhakede wesikhumbi. Kunconywa ukufaka esikhundleni sesihlalo samazinyo ngemuva kokuthi u-10% -15% wesihlalo sezinyo usugugile, ngoba kunenani elikhulu kakhulu lokugqokwa phakathi kwesihlalo samazinyo namazinyo ebhakede. Igebe elikhulu liguqula iphuzu lokulingana nelokucindezela lezinyo lamabhakede nesihlalo sezinyo, kuthi izinyo lamabhakede liphuke ngenxa yokushintsha kwephoyinti lamandla.
04. Ukuhlolwa nsuku zonke nokuqina
Emsebenzini wesondlo wansuku zonke we-excavator, thatha imizuzu emi-2 ngosuku ukuhlola ibhakede. Okuqukethwe kokuhlola okuyinhloko yilezi: izinga lokugqokwa komzimba wamabhakede nokuthi kunemifantu yini. Uma izinga lokugqoka linzima, kufanele kuqiniswe ukuqiniswa. Ngokuqondene nomzimba wamabhakede onemifantu, kufanele ulungiswe ngokushisela ngesikhathi ukugwema ukukhulisa ubude bemifantu ngenxa yokulungiswa okubambezelekile futhi kubangele ukugcinwa okungenakwenzeka. Ngaphezu kwalokho, kufanele ukhahlele amazinyo ebhakede ngezinyawo zakho ukubheka ukuthi amazinyo azinzile yini. Uma amazinyo evulekile, kufanele aqiniswe ngokushesha.
05. Shintsha isikhundla ngemuva kokugqoka
Ukuzijwayeza kufakazele ukuthi ngesikhathi sokusetshenziswa kwamazinyo ebhakede we-excavator, izinyo elingaphandle lebhakede ligqoka ngokushesha okungama-30% kunezinyo elingaphakathi impela. Kunconywa ukuguqula isikhundla samazinyo angaphakathi nangaphandle ngemuva kwesikhathi sokusetshenziswa.
06. Naka indlela yokushayela
Indlela yokushayela yomshayeli we-excavator nayo ibaluleke kakhulu ukwenza ngcono ukusetshenziswa kwamazinyo ebhakede. Umshayeli we-excavator kufanele azame ukungalikhiphi ibhakede lapho ephakamisa i-boom. Uma umshayeli ephakamisa i-boom ngenkathi ehoxisa ibhakede, lo msebenzi uzoba Amazinyo ebhakede abhekane nokudonsela phezulu, ukuze amazinyo ebhakede adwengulwe phezulu, namazinyo ebhakede adabuke. Lo msebenzi udinga ukunakwa okukhethekile ekuhlanganisweni kwesenzo. Abanye abashayeli be-excavator bavame ukusebenzisa amandla amaningi esenzweni sokwandisa ingalo nokuthumela ingalo, futhi ngokushesha "bangqongqoze" ibhakede edwaleni noma baphoqelele ibhakede edwaleni, elizophula amazinyo ebhakede, noma Kulula qhekeza ibhakede bese ulimaza izingalo.
Umshayeli wokumba kufanele anake i-engeli yokumba ngesikhathi sokusebenza. Lapho amazinyo ebhakede emba phansi ngokungafani nendawo yokusebenza, noma i-camber angle ingeqi kuma-degree ayi-120, ukugwema ukwephula amazinyo ebhakede ngenxa yokuthambekela okweqile. Futhi qaphela ukuthi ungavimbi ingalo yokumba kwesobunxele nangakwesokudla ngaphansi kwesimo sokumelana okukhulu, okuzobangela ukuphuka kwamazinyo ebhakede nesihlalo segiya ngenxa yamandla amaningi ngokweqile ngakwesobunxele nangakwesokudla, ngoba inqubo yokwakhiwa kwemishini yamamodeli amaningi we amazinyo ebhakede awacabangi amandla ngakwesobunxele nangakwesokudla. ukwakheka.